ကိုယ့်နောက်ကျော ကိုယ်လုံမိပါစ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကိုယ့်နောက်ကျော ကိုယ်လုံမိပါစ	4
Posted by အောင် မိုးသူ on May 26, 2015 in Creative Writing, Poetry |4comments
ဘဝဟာ “ထောက်”ကနဲ ပွင့်ထွက်လာတဲ့
“ဖျတ်”ကနဲ ဆိုတဲ့ မျက်တောင်တစ်ခတ်စာလိုမျိုး
မသိတသိနေရာက ဘဝတွေဟာ ဝေ့ဝေ့ဝဲဝဲ။
ရှင်းသန့်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ထိတွေ့ (သို့) ရှူ ရှိုက်မိလိမ့်မယ်။
ကျုပ်ကတော့ ကိုယ့်နောက်ကျောမလုံလို့ ခဏခဏပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။
aye.kk says: လောကမှာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သိခြင်း မသိခြင်းတွေ အကြား
ကိုယ့် ကို ကိုယ် မယုံ
ကျောမလုံခြင်းရဲ့ အစလို့ ထင်ပါတယ်
မြစပဲရိုး says: သရဲကားကြည့်ရင်း များ ဒီ ကဗျာ ကို ရေးနေရော့သလား? lol:-))
အောင် မိုးသူ says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.